Isevisi Nokuphindwaphindwa | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
Insizakalo Ephelele Yokwehla Nokuphindwaphindwa
Kungani Kufanele Uphinde Uqinisekise I-Auto Belay Yakho?
Njengesixhobo esibaluleke kakhulu empilweni, isitifiketi somkhiqizo esiqhubekayo siyimfuneko ebalulekile yokusebenza kwe-Perfect Descent Auto Belays. Ukuqinisekisa kabusha kuqala ngokuqaqa, ukuhlanza kanye nokuhlola iyunithi ngayinye. Ukubekezelelwa nezinye izinkomba zokugqoka kuyalinganiswa futhi izingxenye zithathelwa indawo lapho kudingeka. Iyunithi ibuye ihlanganiswe futhi ihlolwe ukuqinisekisa ukuthi isebenza ngaphakathi kwemikhawulo yomkhiqizi.
Ukusetshenziswa nokuthandwa kwama-auto belays ekukhuphukeni kwama-gyms nasezinsizakalweni ezifanayo kukhule kakhulu eminyakeni yamuva namazinga okusebenza kwawo ayaqhubeka nokuvela. Ukwenza ngcono imithethonqubo ye-PPE e-European Union, ikakhulukazi i-EN341: 2011 Class A, imele umhlahlandlela ophelele kakhulu wokusebenza kwama-auto belays okuzithokozisa.
Ama-auto belays aqinisekiswe njenge-EN341: 2011 Class A adinga ukuhlolwa ngezikhathi ezithile nguchwepheshe ogunyaziwe wasefektri njalo ezinyangeni eziyi-12. Lokhu kufaka phakathi i-Perfect Descent Auto Belays enosuku lokwenziwa kukaJulayi 2020 nangezikhathi ezizayo nezindala ezibuyekezelwe isitifiketi se-Class A yisikhungo sesevisi esigunyaziwe sefektri. I-Perfect Descent Auto Belays enosuku lokukhiqiza lukaJuni 2020 nangaphambilini iqinisekiswe njenge-EN341: 2011 Class C futhi idinga ukuhlolwa ngezikhathi ezithile njalo ezinyangeni ezingama-24.
Noma ngabe izinyanga eziyi-12 noma ezingama-24, isikhathi esibekiwe sokuhlolwa ngezikhathi ezithile sithathwa njengesibalo esiphezulu sesikhathi okufanele siphelelwe yisikhathi ngaphambi kokuphindwa kweyunithi. Amayunithi anevolumu ephezulu yokusetshenziswa, lawo asetshenziselwa ukukhuphuka komncintiswano, namayunithi asetshenziswa ezindaweni ezinzima angadinga izivivinyo ezivamile. Akunandaba ukuthi isikhathi sokuphinda kwenziwe kabusha, iyunithi kufanele ibuyiselwe esikhungweni sesevisi noma kunini lapho ukuhlolwa komuntu onekhono kuphakamisa isidingo sokususa iyunithi ekusetshenzisweni.
Umuntu Onekhono - Umuntu okwazi ukuhlola i-Perfect Descent Auto Belays ngokuya ngemikhombandlela yabakhiqizi, ekhomba izingozi ezikhona nezingenzeka, futhi ogunyazwe ngumnikazi / opharetha ukuthatha izinyathelo zokulungisa ngokushesha. Ngendlela yokuqeqeshwa kanye / noma nesipiliyoni, umuntu onolwazi unolwazi ngamapharamitha wokusebenza futhi unegunya lokususa ngokushesha kwinsizakalo noma iyiphi idivayisi okukholakala ukuthi ayisebenzi kahle noma isebenza ngaphandle kwemingcele ebekiwe.
Yisiphi Isitifiketi Esinaso I-Auto Belay Yami?
Ukunquma ukuthi i-auto belay yakho iqinisekiswe njenge-Class A noma i-Class C, mane ubuyekeze usuku lokwenza olukleliswe kwilebula eliseceleni leyunithi.
EN: 341: 2011 Isigaba A - usuku lokukhiqiza lukaJulayi 2020 noma lamuva. I-Class A auto belays idinga ukuphinda kwenziwe kabusha ngezikhathi ezithile okungenani kanye ezinyangeni eziyi-12.
EN341: 2011 Isigaba C - usuku lokwenziwa lukaJuni 2020 noma ngaphambili. Ama-auto belays e-Class C adinga ukwenziwa kabusha ngezikhathi ezithile okungenani kanye ezinyangeni ezingama-24.
Ngingayibuyekeza Idivayisi Yekilasi Lami Ngekilasi A?
Iningi lePerfect Descent Model 220 Auto Belays elenziwe ngaphansi kwesitifiketi seClass C lingabuyekezelwa ku-Class A. Lesi sibuyekezo singenziwa yi Isikhungo Sesevisi Esigunyaziwe ngesikhathi sesitifiketi sakho esilandelayo noma nganoma yisiphi isikhathi phakathi kwemali ekhokhwayo.
I-Perfect Descent Model 220 CR amayunithi angaqinisekiswa kuphela njengamadivayisi e-Class C. Uma usebenza endaweni egunyaza ukunamathela kunqubo yamanje ye-CE, thintana nabaseduze nawe Isikhungo Sesevisi Esigunyaziwe ukuxoxa ngezinketho zakho.
Ngingayithumela Kanjani Idivayisi Yami Yezinsizakalo noma Ukuphinda Kwenziwe Kabusha?
Ngaphambi kokuthumela i-Perfect Descent Auto Belay yakho yensizakalo noma yokwenza kabusha, xhumana ne- Isikhungo Sesevisi Esigunyaziwe eseduze nawe futhi ubanikeze imininingwane elandelayo ngeyunithi ngayinye ohlose ukuyibuyisa:
Usuku lokuphinda kwenziwe kabusha (uma kudingeka)
Uma ubuyela emsebenzini, sicela unikeze incazelo eningiliziwe yenkinga
Uma ubuyela ukuzophinda usebenze, bonisa lokhu esikhungweni sosizo
Pakisha iyunithi ngayinye ebhokisini lokuqala usebenzisa okufakwayo kogwebu ukunciphisa amandla wokulimala ngesikhathi sokuthumela. Qiniseka ukufaka i-Operations Manual equkethe i-Factory Service Log etholakala esigabeni 14.6. Ukufakwa esikhundleni kwebhokisi nokufakwa kwe-foam kungathengwa esikhungweni sakho sesevisi.
Isikhathi esibekiwe sesikhathi seyunithi ezosizakala noma efakwe kabusha ingahluka phakathi kwezikhungo zosizo kanye nomthamo wamayunithi asetshenziswayo ngaleso sikhathi. Imvamisa, amayunithi angalungiselelwa ukuthunyelwa kokubuyisa izinsuku zebhizinisi eziyi-5-8 ngemuva kokuthi amayunithi esetholekile. Thintana nesikhungo sosizo esiseduze nawe ukuze ubuyekeze izinketho zokusheshisa lezi zinsizakalo.